3 sirood oo ragu doonayaan in ay sariirta ku tijaabiyaan | Raganimo University
3 sirood oo ragu doonayaan in ay sariirta ku tijaabiyaan
February 2, 20192 minutes
Ragga waxaa u qarsoon siro badan, qaasatan marka ay timaado xaga sariirta, ragu waxay niyada ku hayaan dhowr arimood in ay tijaabiyaan balse laga yaabo in ay ka xishoodaan in ay gacalisadooda la wadaagaan. Ragga qaar ayaa laga yaabaa in xiriir furan uu kala dhexeeyo xaaskooda oo arimahaan ay horay u wada tijaabiyeen balse qaar ayaa laga yaabaa in ay wali niyada ku hayaan. Halkaan waxaan ku eegeynaa sadex sirood oo raggu ay niyada ku hayaan in ay sariirta ku tijaabiyaan:
In ay tijaabiyaan dhinacyo cusub oo galmo
Lamaanayaasha qaar ayaa la qabsada hal dhinac oo kaliya marka ay isku galmoonayaan, kaasoo u badan in ninku uu dusha ka fuulo gabadha oo dhabarka u jiifta balse ninka ayaa laga yaabaa in uu doonayo in uu tijaabo dhinacyo cusub, oo qaarkood ay yihiin kuwa uu ka xishoonayo. Sida istaaga in uu ugu galmoodo xaaskiisa, iyada oo darbiga ku sii jeeda, ama kursiga isaga oo ku fadhiya in ay iyadu ku fariisato. Muhiimadu waa in labada lamaane ay si furan uga wada hadlaan galmada iyo waxyaabaha ay ku raaxeystaan.
In ay gacalisadu guska u dhuuqdo
Arintaan waa mid ragg badan ay niyada ku hayaan. Qaar ayaa laga yaabaa in ay horeyba u sameeyeen, balse haddii uusan ninkaaga muujin rabitaanka arintaan, ogoow in uu doonayo. Raggu aad ayay ugu riyoodaan arintaan, oo qaar badan ayaa aad ugu kacsada xitaa in ay niyadooda ku soo dhacdo isaga oo xaaskiisa ay u dhuuqayso.
In isagu u dhuuqo xaaskiisa
Dumarka qaar ayaa u maleeya in raggu aysan jeclayn in ay xaaskooda u dhuuqaan siilka, laakiin waxaa hubaal ah in ay jiraan ragg badan oo diyaar u ah in ay tijaabiyaan. Waliba ninka horay u soo tijaabiyay arintaan ayay u badantahay in uu jecelyahay in uu sameeyo markale. Ragga qaar ayaaba ku kacsada in ay dhadhamiyaan dheecaanka siilka, iyagoo aad u jecel in ay dhageystaan dhawaqa ka baxaya gacalisadooda marka ay u leefayaan.